Xarakada Shabab oo weerar ku qaaday hotel kuyaala xebta liido – The Voice of Northeastern Kenya
Xarakada Shabab oo weerar ku qaaday hotel kuyaala xebta liido
Ugu yaraan 6 ruux ayaa la dilay kadib marki dagaalyahanada xarakada shabaab ay weerar loo adeegsaday gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay ay ku qaaden hotel kuyaala xebta liido ee magaala madaxda waddankaas ee muqdisho.
Dagaalyahano ka tirsan shabaab ayaa kadib qaraxaas waxa ay xabada isweydaarsadeen ciidamada booliska ee waddankaas sida laga soo xigtay sarkaalka katirsan booliska waddanka Soomaalia kaas oo la hadlaayay wakaalada wararka ee Reuters.
Al shabaab ayaa waxa ay weeraro badan ka geeysatay waddanka soomaalia iyado weeraradaas ku dishay dad dhawr ah.
Biisha January ayay ahayd marki ay dagaalyahanada Shabaab ay weerar ku qaaden xebta lido waxana ay ku dileen dad tiradooda lagu sheegay in ay ahayd 17 ruux.
Dad goobjoogayaal ah ee ku sugnaa goobta u qaraxa ka dhacay ayaa waxa ay sheegen in marka u qaraxa dhacaayay hoteelka ay ku hareereysnaayen ciidama ka tirsan laamaha ammaanka ee waddankaas iyado ay dagaalyahanada shabaabna bamboo gacmeed ku soo tuuren waxana durbadiiba bilaawday in ay isweydaarsadaan rasaas.
Wasiirka wasaarada arrimaha gudaha iyo ammaanka Abdirizak Omar Mohamed ayaa waxa u barta u twitaarka ku leeyahay uu ugu digay dadka ka agdhawaa goobta u weerarkaas ka dhacay in aysan guryahooda iyo hoteeladooda ka soo bixin iyado u sheegay in aan wax baabur ah aan loo ogaleyn in ay soo galaan goobta u weerarka ka dhacay.
← Manchester City oo isku aadka groupyada la kulmi doonto kooxaha celtic iyo Barcelona
Alfred Mutua oo isaga baxay xisbiga wiper →
1 thought on “Xarakada Shabab oo weerar ku qaaday hotel kuyaala xebta liido”
I am going to let know her. http://Bing.co.uk/